Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Poloney » Poloney dia miomana ny hipoaka amin'ny sehatry ny fizahan-tany
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • culinary • Kolontsaina • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • Vaovao Mafana Poloney • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Nivadika ho toerana lavorary i Polonina ho an'ireo mpandeha tanora izay tsy afaka niaina dia lavitra tsy ho quarantine nandritra ny roa taona.
Polonina dia toerana iray mandavantaona izay manome traikefa tsy manam-paharoa sy sanda tsy manam-petra raha oharina amin'ireo namany eoropeana.
Miaraka amin'ny tetik'asa fandraisam-bahiny 62 mahery efa nomanina ary 35 satria hisokatra amin'ny fomba ofisialy amin'ny 2021, i Polonina dia manao laharam-pahamehana amin'ny fampiroboroboana ny fitomboan'ny fizahan-tany ao anatin'ny vanim-potoana taorian'ny fihanaky ny otrikaretina.
Ny tanànan'ny Polonina dia mampifangaro tsara ny habaky ny tanàn-dehibe amin'ny habaka maitso voajanahary, ary tsy misy tanàna manao izany tsara kokoa noho i Warsaw.
Miaraka amin'ny fanambaràna fa ny rafitra hazavana fifamoivoizana iraisampirenena dia notsorina tany Angletera tamin'ny lisitra mena tokana nanomboka ny fahefatra Oktobra, niverina ny fialantsasatra ho any Polonina, iray amin'ireo toerana tsara indrindra ho an'i Eropa ho an'ireo tanora mpandeha.
Manan-kery manomboka amin'ny 4 Oktobra, ny fanambarana dia midika hoe olona miverina avy Polonina tsy mila mijanona ao amin'ny quarantine hotely intsony, raha tsy tafiditra ao anaty lisitra mena ny firenena. Tsy ilaina intsony ny fitsapana PCR ho an'ireo mpandeha vaksiny feno miverina any Angletera, ary eo ambanin'ny fitondrana fitsapana vaovao, ny olona efa nanana asa roa dia tsy mila manao fitsapana mialoha ny fiaingana alohan'ny handaozany ny firenena izay tsy ao anaty lisitra mena.
Avy amin'ny morontsiraka Baltika madio sy ny morontsiraka fasika fotsy, mahasarika UNESCO-Ny ala arovana sy ny tendrombohitra Tatra titanic mankany amin'ny tanàna be dia be feno tantara, toerana maitso ary lova ara-kolontsaina manankarena, Polonina dia toerana iray mandavantaona izay manome traikefa tsy manam-paharoa sy sanda tsy manam-petra raha oharina amin'ireo namany eoropeana. Ireo antony ireo dia mahatonga an'i Polonina ho toerana mety indrindra ho an'ireo tanora mpandehandeha izay tsy afaka niaina dia lavitra tsy ho quarantine nandritra ny roa taona.
Maherin'ny 62 ny tetikasan'ny hotely vaovao kasaina ary 35 ny hisokatra amin'ny fomba ofisialy amin'ny 2021, ary ahitàna efitrano vaovao 7,422 Polonina, ny firenena dia manao laharam-pahamehana amin'ny fampitomboana ny fitomboan'ny fizahan-tany amin'ny vanim-potoana taorian'ny valan'aretina. Manomboka amin'ny fizahan-tany an-tanàn-dehibe ka hatrany ambanivohitra, amin'ity volana jolay ity, dia nanambara ny UNESCO fa nomena ny Tontolo Lova Iraisam-pirenena momba ny Lova Iraisam-pirenenan'i Polonina. Ny ala mikitroka any Carparthians dia misy firenena maromaro, ary ny faritra Polonina dia ny Valan-javaboary Bieszczady any an-tany hafa.
Toerana fialan-tsasatry ny tanàna tsara indrindra any Eropa ho an'ny tanora mpandeha
Miroboka ao Krakow, renivohitra ara-kolontsaina any Polonina
Krakow dia mipoitra ho iray amin'ireo toerana fialantsasatra voalohany any Eropa, ary misy antony marim-pototra. Manana razamben'izao tontolo izao ny tanàna, miaraka amin'ny Old Town, Wawel Castle ary Kazimierz distrika Kazimierz, izay an'ny lisitra UNESCO World Heritage. I Krakow koa dia renivohitry ny kolontsaina eoropeanina taloha, misy fety mihoatra ny 100 sy hetsika ara-kolontsaina malaza eran-tany atao eto isan-taona. Ho hitanao koa ny ampahefatry ny fanangonana tranombakoka tranombakoka eto an-tanàna. Toy ny hoe tsy dia mahasarika anao ireo fiderana malaza ireo dia lasa renivohitra eoropeanina amin'ny kolontsaina gastronomika ihany koa ny tanàna. Ho hitanao eto ny trano fisakafoanana 26 mitazona ny fanavahana an'i Michelin eto, ary efa ho avo roa heny noho ny maro no nomem-boninahitra avy amin'i Gault & Millau. Manomboka amin'ny vokatra avo lenta ka hatramin'ny chef malaza eran-tany, manan-karena sy maro karazana ny sehatry ny sakafo any Krakow.
Ny Omega Drill an'ny Isiraely dia manao simulation ny fipoahan'ny vaovao ...